ဆောင်းပါး > သားအ > အဆိုပါကိုရွေးနှုတ်သော program တစ်ခု
သူ၏ဧဝံဂေလိတရားအဆုံးတွင် တမန်တော်ယောဟန်၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောမှတ်ချက်များကို သင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်– “ဤစာအုပ်၌မရေးထားသော တပည့်တော်များရှေ့၌ ယေရှုသည် အခြားသောနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကို ပြုတော်မူသည်… သို့ရာတွင် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရေးမှတ်ထားမည်ဆိုလျှင်၊ ရေးလိုသောစာအုပ်များကို လောကီသားတို့ ဆုပ်ကိုင်နိုင်လိမ့်မည်မထင်။” (ယောဟန် ၂၀:၃၀; ၂။1,25) ဤမှတ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ခရစ်ဝင်ကျမ်း လေးစောင်ကြား ခြားနားချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဖော်ပြထားသော ဖော်ပြချက်များသည် ယေရှု၏အသက်တာ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ခြေရာများအဖြစ် ရေးထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ရှင်ယောဟန်က သူ၏ရေးသားချက်များမှာ "ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို ယုံကြည်၍ နာမတော်ကို အမှီပြု၍ အသက်ကိုရစေခြင်းငှာ ယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်းငှာ" (ယော၊ ၂၀း၃၁)။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ၏ အဓိကအာရုံမှာ ကယ်တင်ရှင်အကြောင်း သတင်းကောင်း ကြေငြာရန်နှင့် ကိုယ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးသနားသော ကယ်တင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကယ်တင်ခြင်း (အသက်) ကို အခန်းငယ် ၃၁ တွင် ယေရှု၏နာမတော်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်ကို ယောဟန်မြင်သော်လည်း၊ ခရစ်ယာန်များသည် ယေရှု၏သေခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ဤအတိုချုံးပြောဆိုချက်သည် ယခုအချိန်အထိမှန်ကန်နေသော်လည်း၊ ယေရှု၏အသေခံခြင်းဆိုင်ရာ ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ တစ်ခုတည်းသောရည်ညွှန်းချက်သည် သူမည်သူဖြစ်သည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သူပြုခဲ့သောအရာများ၏ ပြည့်စုံခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောရက်သတ္တပတ်၏ဖြစ်ရပ်များသည် ယေရှု၏အသေခံခြင်း- အရေးကြီးသကဲ့သို့ အရေးကြီးသည်- ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်၏လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်းတို့ပါ၀င်သည့် ပိုကြီးသောအကြောင်းအရာတွင် မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ကိုယ်တော်၏နာမတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်ကိုပေးဆောင်သော ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် မရှိမဖြစ်၊ ရှုပ်ထွေးစွာ မရောယှက်နိုင်သော မှတ်တိုင်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျန်နှစ်များတွင်ကဲ့သို့၊ သန့်ရှင်းသောရက်သတ္တပတ်အတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စုံလင်သောရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတော်ကို ယေရှု၌မြင်လိုပါသည်။
ယေရှုမွေးဖွားခြင်းသည်သာမန်လူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်မွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်အတူဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလူသားတစ် ဦး အဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီးလူသားအားလုံးသည်အာဒံမှမွေးဖွားလာခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သူသည်ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သော်လည်းဘုရားသခင်၏ထာဝရသားတော်သည်အစမှအဆုံး၊ မွေးဖွားခြင်းအထိသေခြင်းတိုင်အောင်လူ့အသက်တာကိုအပြည့်အဝခံယူခဲ့သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေနှင့်ကိုယ်တော်သည်လုံးလုံးလျားလျားဘုရားသခင်ဖြစ်ကာလုံးလုံးလူသားဖြစ်သည်။ ဤလွှမ်းမိုးသောကြေငြာချက်တွင်ထာဝရတန်ဖိုးထားခြင်းကိုခံထိုက်သောထာဝရအဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
သူ၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းနှင့်အတူ၊ ထာဝရဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ထာဝရကာလမှထွက်ခွါလာပြီး၊ အသွေးအသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် အချိန်နှင့်အာကာသဖြင့် အုပ်စိုးထားသည့် သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ “ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိခံယူ၍ ငါတို့တွင်တည်သည်ဖြစ်၍၊ ကျေးဇူးတော်နှင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသော ခမည်းတော်၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်အဖြစ် ဘုန်းအသရေတော်ကို ငါတို့မြင်ရသည်” (ယောဟန်၊ 1,14) ယေရှုသည် အမှန်ပင် သူ၏လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးတွင် တကယ့်လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် သူသည် ခမည်းတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဲ့သို့ပင် လုံး၀ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏မွေးဖွားခြင်းသည် ပရောဖက်ပြုချက်များစွာကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကတိတော်ကို ဖော်ညွှန်းပါသည်။
လူ့ဇာတိခံယူခြင်းသည် သခင်ယေရှုဖွားမြင်ခြင်းနှင့်အတူ အဆုံးမသတ်ခဲ့ဘဲ၊ ၎င်းသည် သူ၏မြေကြီးအသက်တာတစ်ခုလုံးကို ကျော်လွန်ပြီး သူ၏ဘုန်းထင်ရှားသောလူ့ဘဝဖြင့် ယနေ့ထိ အကောင်အထည်ဖော်နေဆဲဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းဖြစ်သည်) ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ခမည်းတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဲ့သို့ အနှစ်သာရအားဖြင့် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် - သူ၏ဘုရားသဘာ၀သည် မထိန်းသိမ်းနိုင်သော ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်ပြီး၊ လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် သူ၏အသက်တာကို ထူးခြားသောအဓိပ္ပာယ်ကို ပေးဆောင်သည်။ ရောမဘာသာတွင် ဤသို့ဆိုသည်။ 8,3ပညတ်တရားသည် မဖြစ်နိုင်သောအရာဖြစ်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသော ဇာတိပကတိအားဖြင့် အားနည်းသောကြောင့်၊ အပြစ်ရှိသော ဇာတိပကတိနှင့် အပြစ်အတွက် သားတော်ကို စေလွှတ်၍၊ ဇာတိပကတိ၌ အပြစ်ကို ရှုတ်ချသောအားဖြင့်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်တကွ၊ ယခု ဇာတိပကတိအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်သော ကျွန်ုပ်တို့၌ ပြည့်စုံစေမည့် ပညတ်တရားဖြစ်သည်”—ပေါလုက “ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ၏အသက်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်” ကြောင်း ပေါလုက ထပ်လောင်းရှင်းပြသည်။ (ရောမ၊ 5,10).
သခင်ယေရှု၏ဘဝနှင့်ဓမ္မအမှုသည်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ နှစ်ခုလုံးသည်လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ God-Man ယေရှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းနှင့်ဘုရားသခင်နှင့်လူစပ်ကြားကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသူဖြစ်သည်။ သူသည်လူ့သဘောသဘာဝတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးအပြစ်ကင်းသောဘဝဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်လူသားများကိုတရားမျှတမှုရှိစေခဲ့သည်။ ဒီအချက်ကဘုရားသခင်နဲ့လူနှစ် ဦး စလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသူဘယ်လိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်။ ခရစ်စမတ်တွင်သူမွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ကျင်းပလေ့ရှိသော်လည်းသူ၏ဘ ၀ ၏ဖြစ်ရပ်များသည်သန့်ရှင်းသောသီတင်းပတ်အတွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုံးစုံလွှမ်းခြုံသောချီးမွမ်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သူ၏အသက်တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၏ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်စုံလင်သောဆက်ဆံရေး၌အတူတကွပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
TF Torrance သည် ဓမ္မဟောင်းယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ မှန်ကန်သောနားလည်မှု၏နောက်ခံကိုဆန့်ကျင်၍ ယေရှု၏အသေခံခြင်းအတွက်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် အယူမှားသောပူဇော်သက္ကာကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရတော့ဘဲ၊ သနားဖွယ်ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးကြီးသောသက်သေခံချက်ဖြစ်သည် (အပြစ်ဖြေခြင်း- The ခရစ်တော်၏ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အလုပ် : Person and ဓမ္မအမှု]၊ စစ. ၃၈-၃၉)။ အစ္စရေး၏ ယဇ်ပူဇော်မှုစနစ်သည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအပေါ် အခြေခံထားသော်လည်း ပုဂံတွင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ဓလေ့ထုံးတမ်းများသည် လက်စားချေခြင်းနိယာမပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ ပူဇော်သက္ကာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းအစား အစ္စရေးလူတွေက သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ဘုရားသခင်က သူတို့ကိုယ်သူတို့ သိမြင်ပြီး သူ့ကို ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့တယ်။
သခင်ယေရှု၏သေခြင်း၏ကံကြမ္မာကို ရည်ညွှန်း၍ ခမည်းတော်နှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းတွင် ပေးအပ်ထားသည့် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကျေးဇူးတော်ကို သက်သေခံရန် ဣသရေလ၏ယဇ်ပူဇော်မှုများသည် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ငါတို့သခင်သည် အသေခံတော်မူသဖြင့် စာတန်ကို အနိုင်ယူ၍ သေခြင်းမှ အုပ်စိုးတော်မူသည်– “ယခုအခါ သားသမီးတို့သည် အသွေးအသားရှိသောကြောင့် အညီအမျှ လက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သေခြင်း၌ အုပ်စိုးသော သူထံမှ တန်ခိုးကို ခံရမည်အကြောင်း၊ အတိအကျပြောရရင်၊ သေခြင်းတရားကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကို မာရ်နတ်ဆီ ရွေးနုတ်ခဲ့တယ်။” (ဟေဗြဲ၊ 2,14စာ-၁၅)။ ပေါလုက ယေရှုသည် “ရန်သူအပေါင်းတို့ကို ဘုရားသခင်သည် မိမိခြေအောက်၌ မချမှီတိုင်အောင် အုပ်စိုးရမည်။ ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ့် နောက်ဆုံးရန်သူကတော့ သေခြင်းပဲ” (1. ကောရိန္သု ၁5,25စာ-၂၆)။ ယေရှု၏အသေခံခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၏ အပြစ်ဖြေခြင်းအသွင်အပြင်ကို ထင်ရှားစေသည်။
သေခြင်းသည် နောက်ဆုံးမဟုတ်ကြောင်း သတိပေးသောကြောင့် ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ကြီးစွာသောရွှင်လန်းမှုဖြင့် ကျင်းပကြသည်။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်သို့သွားရာလမ်းအတွက် အလယ်အလတ်ခြေလှမ်းကို ကိုယ်စားပြုသည် - ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင် ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်။ အီစတာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏သေခြင်းအပေါ် အောင်ပွဲခံပြီး ကိုယ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့်အသက်တာသစ်ကို ဂုဏ်ပြုကြသည်။ ဗျာဒိတ် ၂ ဟူသောအချိန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်စွာ စောင့်မျှော်နေပါသည်။1,4 မိန့်ခွန်းမှာ “[...] ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်လုံးများမှ မျက်ရည်အားလုံးကို သုတ်တော်မူမည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တဖန် သေခြင်းလည်းမရှိ၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပထမ ဆုံးသွားပြီ။" ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းမျှော်လင့်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
Torrances ၏ Atonement စာအုပ်၏နိဒါန်းတွင် Robert Walker က "ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အတူ၊ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားတစ်ဦးအဖြစ်ခံယူကာ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ယူဆောင်လာခဲ့သည်။" CS Lewis က ဤသို့ဆိုသည်- "ခရစ်ယာန်သမိုင်းတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် ဆင်းသက်ပြီး နောက်တဖန်တက်သည်" အံ့သြဖွယ်သတင်းကောင်းမှာ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူနှင့်အတူ မြှောက်စားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ “.. ငါတို့ကို ငါတို့နှင့်အတူ ထမြောက်စေ၍ ယေရှုခရစ်၌ ငါတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ တည်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍ နောင်ကာလ၌ ယေရှုခရစ်၌ ငါတို့၌ရှိသော ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကြွယ်ဝသော ကျေးဇူးတော် ကြွယ်ဝခြင်းတို့ကို ပြမည်အကြောင်း၊” (ဧဖက်၊ 2,6-7) ။
Josep Tkack ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်